Phindela Emvelweni Ngokubuka Kokushona Kwelanga - I-Airbnb
Phindela Emvelweni Ngokubuka Kokushona Kwelanga
West Stockbridge, Massachusetts, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Evergreen Home
U-Evergreen Home Ungumbungazi ovelele
Izungezwe yihlane elihlanzekile nemizuzu nje engu- ukusuka noma kuphi, le ndlwana enhle yalungiswa ngokuphelele ngo-2020, ngenkathi igcina okuthunyelwe kwakudala nemininingwane yokukhanya kusukela ngo-1900. Ngokubuka okushelelayo kwe-Harvey Mountain nokubheka isiziba sasehlathini, jabulela ukufinyelela ezindaweni ezinhle kakhulu zase-Berkshires ngenkathi uzizwa usekhaya kule ndawo enokuthula. Imizuzu engu-8 ukuya edolobheni lase-West Stockbridge, imizuzu engu-20 ukuya edolobheni i-Great Barrington, imizuzu engu-15 ukuya e-Tanglewood.
Ukupaka kuyimfihlo emgwaqeni oyindilinga phambi kwekhaya, indawo ezungeze amadolobha amakhulu ithule futhi izolile. Umgwaqo omncane.
Lena indawo ethule kakhulu, yasemaphandleni elungele ukuhambahamba kwesikhathi eside. Kunamanye amakhaya atholakala emgwaqweni.
Ibungazwe ngu-Evergreen Home
UShana no-Ari bazoba abasingathi bakho ngesikhathi uhlala. Sihlala sitholakala nge-imeyili, ucingo noma umbhalo ukuze sisize nganoma yiziphi izinkinga ezingase ziphakame futhi siphendule noma imiphi imibuzo! Umgomo wethu uhlale uwukuba izivakashi zethu zijabulele ukuhlala ngokukhululeka ekhaya elihle.
UShana no-Ari bazoba abasingathi bakho ngesikhathi uhlala. Sihlala sitholakala nge-imeyili, ucingo noma umbhalo ukuze sisize nganoma yiziphi izinkinga ezingase ziphakame futhi siph…
UEvergreen Home Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- West Stockbridge namaphethelo